jeudi, 14 mai 2020 22:17
Tafika Malagasy: Feno 60 taona ny nitsanganan'ny vondron-tafika voalohany
Feno 60 taona androany 14 may 2020 ny nitsanganan'ny vondron-tafika Malagasy voalohany taorian'ny fitsanganan'ny Repoblika Voalohany araka ny Didim-panjakana laharana 60-102 ny 14 may 1960, dia ny 1 RIAM sy ny 2 RIAM (Régiment Inter-Armes Malagasy na Rezimanta iraisam-piadiana Malagasy).
jeudi, 14 mai 2020 22:09
Covid-19: Mitohy ny fampodian’ny Frantsay ireo terataniny
Hisy sidina roa hiala eto Madagasikara hitondra ireo Frantsay hody any Frantsa. Hanainga ny zoma 15 may 2020 ny ATR 72-600 – 5R-EJB izay fiaramanidin’ny Tsaradia hitondra ny andiany voalohany, ahitana mpandeha 60, ka teratany renioney ny 50 amin’ireo. Hiazo an’i La Réunion ny sidina, ao an-toerana indray ireo mpandeha ireo no handray ny sidina Air Austral, io andro io ihany, hiazo an’i Paris Roissy any Frantsa. Handalo fihibohana mandritra ny 14 ireo mpandeha aorian’ny fahatongavany any Frantsa.
Eo ampiandrasana fankatoavana amin’ny fitondrana malagasy ny sidina faharoa, tokony hitondra ireo teratany frantsay hanainga amin’ny 21 may 2020. Fiaramanidina an’ny kaompania Air France no hitondra azy ireo miainga mivantana eny Ivato hiazo an’i Paris CDG.
jeudi, 14 mai 2020 21:57
Tazomoka mandripaka olona: Manainga ny fanjakana hamonjy ny Faritra Androy sy Anosy ireo senatera HVM
Mandripaka olona maro any amin’ny faritra Androy sy any amin’ny faritra Anosy ny aretina tazomoka hoy ny Loholon’i Madagasikara Randrianantenaina Lucien Luc sy Mamitiana Fabergé avy any amin’ireo Faritra ireo. Manainga ny fitondram-panjakana ireto Loholona avy amin’ny antoko HVM ireto, mba handefa fanafody amin’ny fotoana farany izay haingana, satria efa ho roa volana izay hoy izy ireo no tsy nisian’ny fanafody hanasitranana izany aretina izany ka mahatonga ny fisian’ny fahafatesana maro, izay ny ankizy sy ny zaza no ankamaroan’izy ireo.
Nanainga ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo mba hametrahana programan’asa vaovao entina hiadiana amin’io tazomoka io.
jeudi, 14 mai 2020 21:51
Burundi: Noroahin’ny fanjakana ny solontenan’ny OMS
Nomen’ny fitondram-panjakana any Burundi fe-potoana hatramin’ny rahampitso zoma 15 may 2020 ny solontenan’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na OMS sy ireo Experts telo an’ny OMS miasa ao, hiala ao amin’ity firenena ity. Misy ifandraisany amin’ny fitantanana ny valanaretina Covid-19 ity fanapahan-kevitra ity.
Miisa 15 ny olona mitondra tsimokaretina Covid-19 any Burundi, izay ahitana mponina 11 865 000 ; 7 efa sitra, 1 namoy ny ainy.
jeudi, 14 mai 2020 21:43
Mitondra olona an-tsokosoko: Fiara 9 giazana any ambalam-pamonjana
Fiara, moto, bisikilety ary mpandeha an-tongotra aman’arivony no nosavain’ny Zandary ny tontolo andron’ny 13 may, hetsika tafiditra amin’ny fisorohana ny fihanaky ny valanaretina Covid-19, raha nikasa hiditra sy hivoaka ny faritra Analamanga.
Naverin-dalana ny fiara 562 tamin’ireo 1 665 nosavaina rehefa tsy manana fahazoan-dalana mazava ahafahany mivezivezy anatin’ny ora voafaritry ny Foibem-pibaikoana momba ny Coronavirus na CCO Ivato.
jeudi, 14 mai 2020 21:27
Toamasina: Hiampy ny Foyer Canada ny toerana handraisana ireo marary Covid-19
Tsy mitsaha-mitombo ny olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 eto Toamasina. Nisy tranga vaovao 5 indray androany araka ny tatitra nambaran’ny Pr Vololontiana Hanta, mpitondrateny foibem-pibaikoana ny Covid-19 Ivato. Tombanana tsy ampy handraisana ireo marary vaovao ny toerana ao amin’ny CHU Morafeno, hopitaly manarapenitra natokana handraisana an-tanana ireo marary ny Covid-19 eto Toamasina, ka namaritra ny Foyer Canada ho toerana fanampiny handraisana marary ny fitondram-panjakana.
Misy iraky ny Governemanta tonga eto Toamasina androany, ahitana minisitra enina tarihin’ny Minisitry ny Atitany, ahitana ny Minisitry ny Mponina, Minisitry ny serasera, Minisitry ny Asam-panjakana, Minisitry ny angovo ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena.
jeudi, 14 mai 2020 21:14
Toamasina: Nijery ifotony ny toerana handraisana ireo mararin’ny COVID-19 tao amin'ny CHU Morafeno ny Governora
Nisaotra sy nankahery ireo mpiasan’ny fahasalamana noho ny asa mafy hatrehin'izy ireo. Milamina tsara ny fandraisana antanana ireo marary miisa 40 ao amin'ny CHU Morafeno
Manantitrantitra hatrany Andriamatoa Governora RAFIDISON Richard Théodore, fa ny fitandreman'ny tsirairay no fitaovam-piadiana tena mahomby.
jeudi, 14 mai 2020 21:04
Toamasina: Lutte contre Covid-19 en photo
jeudi, 14 mai 2020 20:14
Covid-19: Nandroso fanitsiana ny fomba fitantanana ny fanampiana ireo Solombavam-bahoaka
Nihaona nivantana tamin’ireo Solombavam-bahoaka teny amin’ny CCI Ivato ny Minisitry ny Ati-tany sy ny Fanapariaham-pahefana Razafimahefa Tianarivelo, ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Pr Ahmad Ahmad, ary ny Minisitry ny Fitaterana, ny Fizahantany sy ny Famantarana ny toetr’andro Randriamandranto Joel ny tolakandron’ny ny 12 mey 2020.
Mikasika ny anjara asan’ny Solombavam-bahoaka manoloana ny Coronavirus no lahadinika tamin’izany.